ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 44°N 18°E﻿ / ﻿44°N 18°E﻿ / 44; 18
ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုးဗီးနား ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အားဖြင့် Bosnia and Herzegovina ဟုခေါ်ဆိုသည်။   ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား နိုင်ငံသည် ဥရောပတောင်ပိုင်း ဘော်လကန် ကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနား သို့ ဘော့စနီးယားဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းလေ့ ရှိကြသည်။ မြောက်ဘက်၊ အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ တို့ ရှိသဖြင့် ဘော့စနီးယားသည် ကုန်းတွင်းပိတ် နိုင်ငံ ဖြစ်လုနီးပါးပင် ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ ဖြစ်သည့် နီယမ်မြို့ (Neum) အနီးအနားဝန်းကျင် ၂၆ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိသော အေဒရီယက်တစ်ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းမှအပ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဟု ဆိုနိုင်သည်။  နိုင်ငံ၏ အတွင်းပိုင်းမှာ အလယ်ပိုင်းမှ တောင်ပိုင်းအထိ တောင်ထူထပ်ပြီး အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တောင်ကုန်းများရှိကာ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် မြေပြန့်ဒေသဖြစ်သည်။
"Državna himna Bosne i Hercegovine"
ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (green)
ရုံးသုံးဘာသာစကား (entity level)
• ဘော့စနီးယား (အလယ်ခေတ်အစောပိုင်း နိုင်ငံထူထောင်ရန်ကြိုးစားခြင်း
• အော်တိုမန်တို့ အောင်မြင်မှု
• ဩစတို-ဟန်ဂေရီးယားတို့ အောင်မြင်၍ ၁၉၀၈ ခုနှစ် သိမ်းပိုက်မှု
• ယူဂိုစလားဗီးယားအား တည်ထောင်ခြင်း
၁၉၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်
၁၉၄၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်
• SFR Yugoslavia အတွင်း SR Bosnia and Herzegovina
၁၉၄၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်
• ယူဂိုစလားဗီးယားမှ လွတ်လပ်ရေးရ
၁၉၉၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်
• ဝါရှင်တန် သဘောတူညီချက်
၁၉၉၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်
• ဒေတွန် သဘောတူညီချက်
၁၉၉၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်
၅၁,၁၂၉ km2 (၁၉,၇၄၁ sq mi) (အဆင့်: ၁၂၅)
၃,၈၂၄,၇၈၂ (အဆင့် - ၁၃၀)
• ၂၀၁၃ သန်းခေါင်စာရင်း
၆၉/km2 (၁၇၈.၇/sq mi)
$၅၁.၉၉၆ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၁၄)
$၁၅,၉၃၅ (အဆင့် - ၇၇)
$၂၁.၉၅၃ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၁၅)
$၆,၇၂၇ (အဆင့် - ၈၉)
အလယ် · ၄၇
မြင့် · ၇၃
ငွေလဲနိုင်သော မက်ခ် (BAM)
တိုင်းပြည်၏ အလယ်ပိုင်းတောင်ပိုင်းတို့တွင် တောတောင်ထူထပ်ပြီး၊ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ကုန်းမြင့်ဒေသ ဖြစ်သည်။ ကုန်းတွင်းပိုင်းသည် ပထဝီဝင်အနေအထား ကွဲပြားနေမှုကြောင့် သင့်တင့်မျှတသော (continental climate) ရာသီဥတုမျိုးရှိသည်။ နွေအခါ လွန်စွာပူပြင်းပြီး၊ ဆောင်းအခါတွင် ဆီးနှင်းများထူထပ်စွာကျသည်။ တောင်ဘက်စွန်းပိုင်းတွင် မြေထဲပင်လယ်ရာသီဥတု (Mediterranean climate) ရှိပြီး မြေပြင်ညီညာပြန့်ပြူးသည်။
တိုင်းပြည်တွင်းတွင် လူမျိုးစု (၃)စုနေထိုင်ကြသည်။ ဘော့စနီယက် (Bosniaks) လူမျိုးစုမှာ လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆာ့ဗ် (Serbs) လူမျိုးစုမှာ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ခရုတ် (Croats) လူမျိုးစုမှာ တတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင် လူမျိုးစုကွဲပြားနေစေကာမူ ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုးဗီးနား နိုင်ငံသားတို့ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့် ဘော့စနီးယန်း (Bosnian) လူမျိုး နှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနီးယန်း (Herzegovinian) လူမျိုး ဟုသာ သတ်မှတ်သည်။ သို့ရာတွင် ဘော့စနီးယန်း နှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနီးယန်း ဝေါဟာရတို့သည် လူမျိုးစုအတွက် သုံးနှုန်းသည် မဟုတ်ပဲ ဒေသပေါ်မူတည်၍ သုံးစွဲခြင်းသာအဓိက ဖြစ်သည်။ ဟာဇီဂိုးဗီးနားသည် တိကျသော နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက်လည်း မရှိပေ။ ဗဟိုထိန်းချုပ်သော နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးမျိုး မဟုတ်ပဲ အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ (၂)ဖွဲ့ ရှိသည်။ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုးဗီးနား ဖက်ဒရေးရှင်း (Federation of Bosnia and Herzegovina) အစိုးရ နှင့် ဆာ့ပ်စ်ကာသမ္မတနိုင်ငံ (Republika Srpska) အစိုးရတို့ ဖြစ်ကြသည်။ တဖန် ယင်းအစိုးရတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပူးတွဲအုပ်ချုပ်သော ဘရော့ကိုခရိုင် (Brčko District) ကလည်း တတိယ အုပ်ချုပ်ရေးဒေသတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။
ယခင်က ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် (၆)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ယူဂိုဆလားဗီးယားပြည်ထောင်စု ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုးဗီးနား (Bosnia and Herzegovina) သည် ၁၉၉၀ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း ယူဂိုဆလပ်ဗ်စစ်ပွဲများအတွင်း လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးပြီး ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို အသွင်ကူးပြောင်းလျက် ရှိသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ခွင့်ရရှိရန် လျှောက်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀၊ ဧပြီလတွင် နေတိုးအဖွဲ့ လေ့လာသူနိုင်ငံအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသည်။ ၂၀၀၂ခု၊ ဧပြီလ(၂၄)ရက်နေ့မှစ၍ ဥရောပကောင်စီ (Council of Europe) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၃)ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်သော မြေထဲပင်လယ်သမဂ္ဂ (Mediterranean Union) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။
ဤအပိုင်းမှာ ဗလာဖြစ်နေသည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Constitution of Bosnia and Herzegovina။ 28 October 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bosnia and Herzegovina • Country facts • PopulationData.net။
↑ Danas se iz Norveške kući vraća 13 državljana BiH,ašta je sa ostalima? (in bs)။
↑ ၄.၀ ၄.၁ CIA 2019.
↑ Bosnia and Herzegovina - The World Factbook။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Popis2013
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ Report for Selected Countries and Subjects။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (28 December 2019)။
↑ Distribution of family income – Gini index။ The World Factbook။ TWB။
↑ Bosnia and Herzegovina – Definition of Bosnia and Herzegovina at။ Yourdictionary.com။ 2010-01-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Field Listing – Coastline Archived 16 July 2017 at the Wayback Machine., The World Factbook, 2006-08-22
↑ Bosnia and Herzegovina: I: Introduction, Encarta, 2006. Archived 2009-10-31.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘော့စနီးယားနှင့်_ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ&oldid=727486" မှ ရယူရန်
၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။